Covid - Proton any California
Azafady mba atoroy matetika eto ny fanavaozana momba ny Proton California sy ny fepetra hitandremana ny fitsaboana amin'ny fomba azo antoka. Havaozina tsy tapaka ny fampahalalana.
Mijanona eo amin'ny lamin-trano
Ny alakamisy 19 martsa 2020, ny governora any California Gavin Newsom dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny baikon'ny "fijanonana ao an-trano". Ity no ezaka farany ataon'ny Fanjakana amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus.
Te hanome toky anao izahay fa mijanona misokatra ho an'ny fitsaboana marary.
California Protons Cancer Therapy Centre dia namoaka taratasy ho an'ireo marary ankehitriny izay manambara fa voatsabo ao amin'ny Centre-n'izy ireo izao. Raha marary ankehitriny ianao, mangataka izahay azafady hitondra izany miaraka aminao rehefa mamindra sy avy amin'ny fotoana voatondro isan'andro ianao. Raha tsy mahay manao pirinty ianao, dia azo atolotra anao eny am-birao eo afovoan'ilay Centre ny kitay sarotra.
Raha manana fanontaniana ianao, azafady miantso ny California Protons Cancer Therapy Center amin'ny (858) 549-7400.
Fiarovana fiarovana COVID-19
Araka ny fantatry ny maro aminareo dia mitombo hatrany ny ahiahy manodidina ny fihanaky ny virus COVID-19 (izay antsoina matetika hoe "coronavirus") ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Ny laharam-pahamehan'ny ivon-toeram-pitsaboana any California Protons Cancer Therapy dia miaro ny fahasalaman'ireo marary sy mpiasa ato aminay. Nanara-maso akaiky ny raharaha izahay, ary manohy manombana ireo fivoarana vaovao ary mandray ny fepetra mety hamahana ny risika. Ny fahasalamanao sy ny fiarovana anao no laharam-pahamehana. Na dia tsy nisy tranga coronavirus aza tany California Protons, dia mbola manatsara ny fiarovana ihany isika.
Mba hisorohana ny fihanaky ny aretina dia manohy manentana ny fahadiovana tsara isika anisan'izany ny fampiasana ny manadio ny tànana sy ny fanasana matetika matetika, manao fanaovan-jaza mitokana toy ny fangatahana ny marary sy ny mpitsidika hanao saron-tava raha misy soritr'aretina mavitrika, miangavy ny mpiasa tsy mijanona ao an-trano. ary ny fanadiovana ny haingam-pandeha mafy, ao anatin'izany ny fitaovana fitsaboana.
Ho fanampin'ireo fomba fanao ireo dia tianay hampahafantatra anao ireo fanovana manaraka ireto:
projection: Ny marary sy ny mpiasa rehetra miditra amin'ny trano dia hozahana isan'andro amin'ny tranga mety hitranga sy soritr'aretina mety hitranga amin'ny COVID-19. Raha sendra tazo ianao, kohaka vaovao, sempotra vaovao, aretin-tenda vaovao, fivalanana, fanaintainan'ny vatana, na fofona na fofona, azafady miantso ny Center amin'ny (858) 549-7400 raha mila torolalana fanampiny momba ny fotoana nanendrena anao.
Fitaovana fiarovana: Taorian'ny fitarihan'ny CDC sy ny UC San Diego Health, ny mpiasa dia hitafy saron-tava mandritra ny fihaonana, ny fanendrena ary ny fitsaboana. Ho an'ny fiarovana anao sy ny ekipanay izany.
Famerana ny mpitsidika: Amin'izao vanim-potoana izao dia mametra ny mpitsidika rehetra isika (mpivady, hafa, fianakaviana, namana, sns) tsy hiditra amin'ny tranobe misy antsika. Tongasoa ny mpitsidika miandry eny ivelany na amin'ny fiarany. Manantena izahay fa tsy ho vetivety ny famerana ny mpitsidika. Raha manana toe-javatra manokana ianao ka mila fanampiana fanampiny dia ampahafantaro anay ary hanao izay tratry ny herinay izahay. Ny mpivady sy ny manan-danja hafa dia mety handray anjara amin'ny fanendrena amin'ny alàlan'ny telefaona raha tiana.
Hetsika vondrona: Ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny fielezan'ny virus dia ny fisorohana ny fifandraisana amin'ny olona manokana. Noho izany, ny Centre dia nanapa-kevitra ny hanafoana ireo hetsika andiany vitsivitsy ho an'ny hoavy mialoha. Fantatray fa loharano manan-danja ho an'ny marary misy antsika izany ary malahelo ny tokony hampihemotra, na izany aza, ny fiarovana ny marary anay no laharam-pahamehana indrindra ary mino fa ity dia dingana iray malina.
Fifanakalozan-kevitra an-tariby sy horonantsary ary fanarahana
Na dia atoro hevitra aza ny fifampidinihana mivantana raha azo atao, dia nanomboka nanolotra consultations sy fanendrena fanaraha-maso izahay tamin'ny alàlan'ny antso an-tariby na video. Raha tsy mahazo aina ianao miditra amin'ny Ivotoerana, na mandeha, azafady miantso anay amin'ny (858) 549-7400 handamina ny fotoana nifaneraseranao.
Ireo marary manana soritr'aretin'ny COVID-19
Amin'izao fotoana izao, Kalifornia Protons dia malina be indrindra mikasika ny fivoahan'ny Coronavirus tato ho ato. Ny marary antsika dia voan'ny immunocompromised ary noho izany dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra sy ny fisorohana isika mba hampihenana ny aretina mety ho azon'izy ireo mifandray.
Noho izany antony izany dia mila tombanana ny mpitsabo, mpitsidika, mpivarotra na mpiasan'ny mpiasa izay marary (tazo, kohaka, fohy ny fofon'aina, tendany, tenda, na fahatsapana fa tsy salama). efitra vonjy taitra. Ireo biraon'ny fikarakarana voalohany sy ireo efitrano vonjy maika ao an-toerana dia mangataka ny hiantsoanao mialoha mba hanaitra ny mpiasa amin'ireo soritr'aretinao. Ny lisitra kely eto ambany dia safidy vitsivitsy hanaovana fanombanana ao amin'ny faritra akaiky.
FANAMARIHANA: Raha manana karazana alahelo ianao, dia antsoy ny 911 avy hatrany, na tsidiho ny efitrano vonjy maika.
Sampana vonjy maika UC San Diego
9434 Center Medical Dr.
Tsiakoraka Njakatiana Dai Hotline
Azafady mba jereo ny mpitsabo anao amin'ny fanombanana ary antsoy izahay alohan'ny hiverenany any amin'ny Centre. Izahay dia mitaky antontan-taratasy avy amin'ny dokotera izay nataonao tombanana ary milaza fa tsy mifanohitra amin'ny Coronavirus ianao.
Misaotra anao noho ny fahatakaranay fa miaro ny marary sy ny mpiasa izahay amin'ny aretina rehetra mba hahafahantsika manohy mitandrina ny marary anay.